Saint Kitts နှင့် Nevis နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို -
● Saint Kitts နှင့် Nevis မှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်
အကောင်းဆုံး စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူသူများ နှင့်ရှေ့နေများ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ , Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နှင့်နေထိုင်ခွင့်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း, Saint-Kitts တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း။ Nevis၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်နေထိုင်မှု၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု , Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ Sa တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း int Kitts and Nevis၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိစီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နှင့် Nevis သည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နဗီးရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယပတ်စ်ပို့သည်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံသားစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်ရှိရွှေဗီဇာ၊ Nevis၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီရှိဒုတိယမြောက်ဗီဇာဒုတိယရွှေဗီ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်များတွင် ogram၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားနှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်များကိုထပ်မံအထောက်အပံ့ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: EUR 250,000
Saint Kitts နှင့် Nevis အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Kitts နှင့် Nevis ကျွန်းများသည် Saint Christopher နှင့် Nevis တို့၏အဖွဲ့ချုပ်၏တရားဝင်အမည်ဖြစ်ပြီးကာရစ်ဘီယံရှိဗြိတိသျှဓနသဟာယအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ စိန့်ကစ်ကျွန်းကိုဗြိတိသျှနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံဟောင်းများကအခြေချနေထိုင်ရန်အဓိကကျွန်းဖြစ်သောကြောင့်အနောက်တိုင်းအင်ဒီးစ်ရှိမိခင်များကိုလိုနီဟုလည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ဤကျွန်းနှစ်ခုစလုံးသည်အီကွေတာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်အနိမ့်ဆုံးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။
စိန့်ကစ်သည်ကျွန်းနှစ်ကျွန်းတွင်ပိုမိုကြီးမားပြီးအနည်းငယ်မျှသာပိုမိုတည်ရှိပြီးတိုင်းပြည်၏မြို့တော်ဘော့စထရာကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ Nevis, ထို့နောက်တဖန်, အတန်ငယ် "ထိန်းချုပ်မှုထဲကပို" နှင့်ပိုပြီးဆုတ်ယုတ်မှုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူကပြီးပြည့်စုံသောပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့်တောင်တက်ရှုခင်းနှင့်ပတ်သက်။ ၎င်း၏သာ။ ကြီးမြတ်အမွှာ Beats ။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ကျွန်းနှစ်ကျွန်းသည်ယခုအချိန်တွင်အရွယ်အစားရှိသော်လည်းထူးခြားသည့်လက္ခဏာများနှင့်လူလုပ်ပြုလုပ်ထားသောမြင်ကွင်းများကိုထူးခြားစွာမြင်နိုင်သည်။ မရေမတွက်နိုင်သောပင်လယ်ကမ်းခြေများနှင့်သမုဒ္ဒရာဘက်မှကြည့်ရှုခြင်းအပြင်ကာရစ်ဘီယံကျွန်းတစ်ကျွန်းမှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှစ်ခုလုံးသည်ထိပ်တန်းတောင်တက်လမ်းကြောင်းအချို့ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ စိန့်ကစ်စ်တွင်မြင့်မားသော ၁၁၅၅ မီတာအမြင့်မှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှုခင်းများကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်ပြင်းထန်သောအရည်တွင်းရှိ Liamuiga တောင်တန်းရှိပြီး Nevis Peak သည်စမ်းသပ်မှုနှင့်အားအင်ပြည့်ဝမှုမရှိပေ။ ကျွန်းနှစ်ခုတွင်အလားတူအပူပိုင်းမိုးသစ်တောများရှိပြီးသူတို့၏မီးတောင်ဗဟိုချက်ဒေသကိုဖုံးအုပ်ထားသဖြင့်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တောင်တက်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စိန့်ကစ်စ်တွင်တည်ရှိသည့် Brimstone Hill နှင့်လှပသောမီးရထားလမ်းတို့သည်ကျွန်းများပေါ်တွင်လွဲချော်ရမည့်လူလုပ်သည့်ဆွဲဆောင်မှုနှစ်ခုရှိသည်။ Brimstone Hill Fortress သည်စိန့်ကစ်စ်သည်တစ်ချိန်ကထိုဒေသရှိဗြိတိသျှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း၏အဓိကဝေဖန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေအထောက်အထားများကိုဆွဲဆောင်သည်။ ၁၇ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်အတင်းအဓမ္မတုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသောရဲတိုက်သည်အီကွေတာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိအခြားအကာအကွယ်ခံထားရသောခံတပ်များအနက်ထူးခြားသောအဖြစ်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ လှပသောရထားလမ်းသည်ကျွန်း၏အတွေ့အကြုံများ၏နောက်ထပ်သရုပ်ပြတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနှစ်ဆယ်ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင် အသုံးပြု၍ စက်ရုံများသို့သကြားဓာတ်ချောင်းများသယ်ဆောင်ရန်စက်ရုံပိတ်ပြီးသည်နှင့်လှပသောလမ်းကြောင်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ရထားလမ်းသည်ကျွန်းကိုဝိုင်းရံထားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်းငယ်လေးသည်ကရစ်ဘီယံဒေသအများစုသို့သွားလာမှုနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုဖော်ပြသည်။ ထိုဒေသတွင်ပျံ့နှံ့သွားသောခရီးသွားအဖျား၏တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရိုင်၏ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့်တိုင်းပြည်သည်စူးစမ်းရှာဖွေသူအမြောက်အများကိုရရှိလာသည်မှာထင်ရှားသည်။ သို့သော်လည်းသင်သည်အရာရာကိုကြည့်ရှုသူများအတွက်မဟုတ်ဘဲကျွန်း၏နေထိုင်သူများသည်စင်စစ်အားဖြင့်သူတို့၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ကမ်းလှမ်းမှုပြင်ပတွင်နေထိုင်နေသည်ဟုသင်ခံစားရသည်။ အနီးအနားရှိအစိုးရမှခရီးသွားလုပ်ငန်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးချဲ့ရန်ကြိုးပမ်းမှုများရှိနေသည်မှာထင်ရှားသော်လည်း၊ တိုင်းပြည်သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကာရစ်ဘီယံနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ကျွန်းများသည်အပန်းဖြေခရီးသွား of ည့်သည်များအားဖြင့်ရေကြီးမှုများကြောင့်ကာရစ်ဘီယံဒေသရှိဒေသအများစုထက်အခြေခံအားဖြင့် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ သာဓကအားဖြင့်မိသားစုခေါင်မိုးလေးခန်းအတွက်ငှားရမ်းခသည်ပရီမီယံဒေသများတွင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ အထိမြင့်တက်နိုင်သော်လည်းလူသိနည်းသောဇုန်များတွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ အောက်ဖြင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည်ကာရစ်ဘီယံကန့်ကွက်မှုများထက်အကြမ်းအားဖြင့်ထက် ၀ က်နိမ့်သည်။
သင်ပိုမိုနီးကပ်စွာ (ဖတ်ပါ - မကြာခဏဖတ်ပါ - မကြာခဏဖတ်ပါ) ကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံ၏ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ ထာဝရတည်တံ့မည်ကိုစဉ်းစားသည်ဖြစ်စေစိန့်ကစ်နှင့်နဗီးတို့သည်စစ်မှန်သောအကောင်းဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအံ့ဖွယ်အမှုများ၊ ဆုတ်ယုတ်မှု၊ မမြင်ရသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အသင့်အတင့်ရှိသောပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်များသည်အပူပိုင်းဒေသကယ်ဆယ်ရေးကိုရှာဖွေသူများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အချိန်ကိုတွက်ချက်သည်
အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
အိမ်ခြံမြေ / လှူဒါန်းမှု
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်အဘယ်ကြောင့်သွားရမည်နည်း
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့သည်လှပသောကမ်းခြေများနှင့်အပူပိုင်းရှုခင်းများရှိသောတိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးအမြန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ရွှေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ပြီးစိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုအလွန်အသုံးများစေသည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောအပိုင်းတစ်ခုမှာစိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များကိုလျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသွားရန်မလိုပါ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်၌ပင်သင်ထိုတွင်နေထိုင်ရန်မလိုပါ။ ၎င်းသည်အခွန်စည်းကြပ်သည့်စနစ်ကြောင့်နေထိုင်သူမဟုတ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ၀ င်ငွေအပေါ်မည်သည့်အခွန်မှမပေးရပါ။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုဝင်များအားလျှောက်လွှာတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဟောင်ကောင်နှင့်စင်ကာပူအပါအ ၀ င်အီးယူနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သို့ဗီဇာမဲ့ခရီးသွားလာခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိမိသားစုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်၊ အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့် ၅၅ နှစ်အောက်မိဘများအပါအ ၀ င်သင့်အပေါ်ငွေရေးကြေးရေးအရမှီခိုလျှင်သင်၏ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုလည်းသင်၏လျှောက်လွှာတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏နိုင်ငံသားအသစ်သည်အသက်မပြည့်သေးသောကလေးသူငယ်များသို့တိုးချဲ့နိုင်သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပြီးမှမွေးဖွားလာသူဖြစ်၏။
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပုံမှန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ (သို့) အရည်အချင်းရှိရန်မလိုပဲ၊ သန့်ရှင်းသောကျန်းမာရေးဥပဒေကြမ်းနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုသာမရှိဘဲလျှောက်ထားပြီး ၄ လအတွင်းခွင့်ပြုသည်။ လျှောက်လွှာကိုသင်၏နေရင်းနိုင်ငံမှတင်သွင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လျှောက်လွှာတင်ချိန်အတွင်းသင်သည် St. Kitts နှင့် Nevis သို့ပျံသန်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားပြီးပါက St. Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်နေထိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ခွင့်ပြု။
Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ရရှိရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းလမ်းသုံးခုအနက်မှတစ်ခုမှာသကြားစက်မှုလုပ်ငန်းမတူကွဲပြားခြင်းဖောင်ဒေးရှင်းသို့ငွေပြန်အမ်းခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် လျှောက်ထားသူတစ် ဦး သည်အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သတ်မှတ်ထားသည်။
အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀ နှင့်အစိုးရသတ်မှတ်ထားသောအိမ်ခြံမြေများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခွန်အခများသည်ဒုတိယရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ ဒီ option ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါတည်ငြိမ်တဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်မရှိဘူး၊ ဆိုလိုတာကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးသက်တမ်းရှည်နိုင်တယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို (၅) နှစ်ထားရှိပြီးနောက်တွင်၎င်းသည် ၀ ယ်သူ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုလျှောက်လွှာအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကပြုလုပ်သည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအား Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ Saint-Kitts နှင့် Nevis မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများအားနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Saint Kitts နှင့် Nevis မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis မှ Golden Visa သို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သက်သက်သာသာမဟုတ်ပါ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis မှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီပေးပါသည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုလျှင်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့အတွက်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အတွက်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတို့မှတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား
Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
Saint-Kitts နှင့် Nevis ရှိနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
Saint-Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
Saint Kitts နှင့် Nevis မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
Saint-Kitts နှင့် Nevis ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖောက်သည်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအနေဖြင့်စိန့်ကစ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှထွက်ခွာသွားရန်စိတ်အားထက်သန်စွာ ၀ င်ငွေရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ နီဗစ်။ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးအတွေ့အကြုံကောင်းသူ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်သင်၏စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အသေးစိတ်အထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများကိုပေးလိမ့်မည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဖောက်သည်များအားစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး လျောက်ပတ်စွာစေ့စေ့စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူချက်စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများနှင့်ရွှေဗီဇာသည်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်ရန်အထောက်အကူပြုမည်။
Saint နှင့် Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်သင်နှင့်သင်၏မိသားစု၏စာရွက်စာတမ်းများကိုအဆင်သင့်ပြုလုပ်ပြီးလျှင်၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အတူဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
Duration: 6-8 လအတွင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသင်၏လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင့်အားမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis သို့လက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကုန်သည်များ (သို့) ဖြန့်ဖြူးသူများအားရောင်းချခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်စက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့ကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့၌သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အကူအညီမရရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား စိန့်ကစ်နှင့် Nevis အတွက်ရှေ့ရပျ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါ
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : Saint Kitts နှင့် Nevis နှင့် KYC တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် MM Solutions INC သည် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုယူထားသည်။ သို့သော်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုရန်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏အောင်မြင်မှုအကောင်းဆုံးနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများကို Saint Kitts နှင့် Nevis တို့အားဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကို Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှအတွေ့အကြုံရှိသောနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမတိုင်မီနှင့်အတည်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့များအတွက်ထိုနေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။
အကယ်၍ Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံ ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ် B. နှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ပါ
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အမြားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေနှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်
ယာယီနေထိုင်ခွင့် စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ၌တည်၏
Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအခွန်များ
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သင်မည်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်မည်နည်း။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအပြင် Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းကိုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗီအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်နေရာတည်းဖြစ်စေနိုင်သည် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်နှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်သည်။
Saint, Kitts နှင့် Nevis တို့၏မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်နိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံတကာမှ Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျော်လွန်သောနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီ
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ စျေးသက်သာသော) ။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဘဏ်အကောင့်
Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စာရင်း စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိငွေပေးချေမှုသည့်ဂိတ်
ဒါ့အပြင်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်ကိုသင်စီစဉ်ထားလျှင် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစတင်ရန် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တွင်ချက်ချင်းစတင်ပါ။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ HR Services
ကျွန်တော်တို့၏ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်နေရာချထားပါ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဘဏ္Plာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Virtual Office လိပ်စာ
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက် Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် \_ t အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်.
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဝက်ဘ်ဒီဇိုင်း
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ App Development
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှု
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ SEO
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီသည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများဖြင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖောက်သည်များဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်များအတွက်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုရထိုက်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနိုင်ငံသားကသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis သို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ Saint Kitts နှင့် Nevis ကုမ္ပဏီများအားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏စိတ္တဇကို Saint Kitts နှင့် Nevis နယ်မြေများတွင်တရား ၀ င်တရားဝင်သတ်မှတ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗ်စ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏အဓိပ္ပာယ်ကားအဘယ်နည်း။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကို Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်စိန့်ကစ်နှင့် Nevis တို့၏နေထိုင်မှုကိုစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များမှစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်မှုအားဖြင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှုမှတဆင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့အားနေထိုင်ခြင်း စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု။ | စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့မှတစ်ဆင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီးစ်တို့၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားကထောက်ခံသည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီးစ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နှင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ | စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး | စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏စီးပွါးရေး၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ဒုတိယအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အတွက်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗဲစ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီးစ်ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိရွှေဗီဇာကိုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်၏နေအိမ်ခွင့်ပြုချက်ကိုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားရန် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးတို့၏ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်သည်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီအတွက်ရွှေဗီဇာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗတ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗ်ရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများမှတဆင့် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အတွက်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြစ်သည်။
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
နိုင်ငံသားများအတွက်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းဆုံးမှာယူရို ၂၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
Saint Kitts နှင့် Nevis for Citizenship တို့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုစရိတ်နှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားများအတွက် Saint-Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခကိုသာပေးပြီးအခြားအထောက်အပံ့များစွာကိုလည်းပေးပါသည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုနိုင်ငံတိုင်းမှနိုင်ငံသားများကအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ - အာရှမှစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များ၊ နိုင်ငံသား၊ အာဖရိကမှစိန့်ကစ်များနှင့်နဗီးများသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဥရောပမှစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ တောင်အမေရိကမှ Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မလေးရှားမှ Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အင်ဒိုနီးရှားမှ Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ Kitts နှင့် Nevis၊ နီပေါမှ Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိန္ဒိယမှ Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ယူအေအီးမှ Saint Kitts နှင့် Nevis သို့နိုင်ငံသားပြုခြင်း။
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
အရှေ့ကာရစ်ဘီယံ Securities Exchange
ဘဏ္ofာရေး / စျေးကွက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်နှင့်ပတ်သက်သောအခြားအချက်အလက်များ။
ဆက်သွယ်ရေးယူနစ် - ၀ န်ကြီးချုပ်ရုံး
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ် ၀ န်ကြီးချုပ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်၏နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်
Saint Kitts ကိုစူးစမ်းပါ
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အစိုးရ၏ CIU ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
link ကိုမှ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်
Saint Kitts နှင့် Nevis တည်နေရာ